ဖျာပုံ-နဒီ: February 2012
လူမဲတွေ ဖိနှိပ်ခံရတဲ့အကြောင်းတွေကို ဒီလောက်နဲ့ ရပ်ပြီးသကာလ ရိုက်စ်ကို မီဒီယာမှာ နာမည်ပျက်စေခဲ့တဲ့ အကြောင်းတစ်ခုကို ဆက်ပြောရအောင်။ မျက်လုံးကျယ်သွားတာပေါ့...ဟီး...ဒါမျိုးဆို သိပ်ပြောချင်တာ။
ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုပြိုကွဲဖို့နီးကပ်နေချိန်မို့ သူ့အကြံဥာဏ်တွေကို အစိုးရက အရမ်းအားထားခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် တက္ကသိုလ်အလုပ်က ၂ နှစ်ထက်ပိုပြီး ခွင့်မရလို့ ၁၉၉၁ မှာ စတန်းဖိုဒ် တက္ကသိုလ်မှာ အလုပ်ပြန်ဝင်ခဲ့တယ်။အဲဒီမှာ ဂျော်ရှ် ဆိုတဲ့ဘဲကြီး တစ်ဗွေနဲ့တွေ့ပါလေရော။ အဲ...ယောင်လို့ ။ဘယ်က ဘဲကြီးရမှာလဲ။ လူကြီးလူကောင်းကြီးပါ။ အမေရိကန်သမ္မတ ရော်နယ်ရေဂင် လက်ထက်က နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး George P.Shultz လေ ။ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မဖြစ်ခင်မှာ အလုပ်သမားရေးရာ ၀န်ကြီး၊ ပြီးတော့ ဘန်ဏာရေးဝန်ကြီးဖြစ်ခဲ့သူပါ။ သူဟာ နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲမ၀င်ခင်တုန်းက မက်ဆာချူးဆက် နည်းပညာတက္ကသိုလ်နဲ့ ချီကာဂို တက္ကသိုလ်တို့မှာ ဆရာဖြစ်ခဲ့တယ်။ ရိုက်စ်နဲ့ သိတဲ့အချိန်မှာတော့နိုင်ငံရေးကအနားယူပြီး စတန်ဖို့Standford တက္ကသိုလ်ရဲ့ ဗဟုအဖွဲ့ think tank ( ထိပ်တန်းပညာရှင်များအဖွဲ့ ) ထဲမှာ ပါဝင်နေဆဲ။
ကာဇာကစ်တန်ဆိုတာ ဆိုဗီယက်ကနေနောက်ဆံုးခွဲထွက်ခဲ့တဲ့ကမ္ဘာအကြီးဆုံးကုန်းပိတ်နိုင်ငံဖြစ်တယ်။သမိုင်းမသိရင် အကန်းနဲ့တူတယ် ပထ၀ီမသိရင် အကျိုးနဲ့တူတယ် ဆိုတဲ့ စကားလေး အားကိုးနဲ့ ( ဘူပြောခဲ့တာလဲတော့ မတိဘူး ။ မေ့တွားပီ ) လျှာရှည်လိုက်ဦးမယ်နော်....ခွင့်ပြုပါ။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ စတန်နဲ့ ဆုံးတဲ့ နိုင်ငံခုနစ်နိုင်ငံထဲက တစ်နိုင်ငံပေါ့။
ရိုက်စ်ကို ကျောင်းသားတွေ ခဏခဏမေးလေ့ရှိတာက ကိုယ့်ဝါသနာနဲ့တကယ်လုပ်ရတာထပ်တူကျတဲ့နေရာကို ဘယ်လိုရောက်လာသလဲဆိုတာပါ ။ အဲဒီမေးခွန်းက လူတော်များများ စိတ်ဝင်စားပြီး သိချင်ကြတယ်။ လူတော်တော်များများဟာ လုပ်ချင်တာနဲ့ လုပ်နေရတာ ထပ်တူမကျကြဘူး မဟုတ်လား ။ တစ်ချို့ဆို ကိုယ်ဘာလုပ်ချင်တယ်ဆိုတာတောင် နားမလည်နိုင်ဘဲ ယောင်လည်လည် ဖြစ်နေတုန်းလေ။(အဲဒါကိုယ့်ကိုယ်ကို စောင်းပြောတာ)။ သူက စန္ဒရားမှာ အလုပ်မဖြစ်လို့ရောက်လာတာလို့ခပ်နောက်နောက်နဲ့အရွှန်းဖောက်တတ်ပါတယ်။ အတည်ဖြေတာကတော့ တက္ကသိုလ်မရောက်ခင် ကိုယ်ဘာဝါသနာပါလဲ ကိုယ့်ရဲ့ passion ဟာဘာလဲ ဆိုတာကို သိအောင်လုပ်ပါတဲ့။ကိုယ့်ဘ၀အတွက်ဝင်ငွေကောင်းမယ့်အလုပ် ၊ဂုဏ်ရှိမယ့်အလုပ်တွေကို ခဏဖယ်ထားပြီး မနက်အိပ်ရာက အစောကြီးနှိုးပြီး ခိုင်းရင်တောင် စိတ်ပါလက်ပါလုပ်နိုင်မယ့် အရာကို ရှာပါ။ မတွေ့မချင်းရှာပါ။
သူ့တုန်းကလည်း အစက စန္ဒရားနဲ့ ဘွဲ့ယူဖို့လုပ်ထားတာ။ နောက်တော့ ၁၁ အရွယ် စန္ဒရားပါရမီရှင်လေးကို တွေ့ပြီး သူနားလည်သွားတာက စန္ဒရားဟာ သူ့ရဲ့ တကယ့်ဝါသနာအစစ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာပါပဲ။သူ့ရဲ့ တကယ့်ဝါသနာ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံကို မတတ်ခင် သူဟိုအတန်းတက်ကြည့် ဒီအတန်းတက်ကြည့် ယောင်တောင်တောင် ဖြစ်နေခဲ့သေးတယ်။ တစ်နေ့ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံသင်တဲ့ အခန်းထဲ ၀င်တက်ကြည့်မှ ဒါငါလုပ်ချင်တာပဲ ဆိုတာ သိသွားခဲ့တယ်။ အဲဒီမေဂျာမှာ အရမ်းကို ပါရမီပါခဲ့တာ နောက်ပိုင်း သူ့ရဲ့ အောင်မြင်မှုတွေက သက်သေပါဘဲ။ ( ဒီစာဖတ်ပြီး ငါလုပ်နေရတာကို ငါကြိုက်ဖူး ဆိုပြီး ဟိုတွေးဒီတွေးတွေ နေမထိထိုင်မသာ ဖြစ်လာရင်တော့ ဒို့ပါဘူးကွ ။ ကြိုခေါင်းရှောင်ထားတာ )
အမေရိကန်မှာ ဥပဒေတွေပြုရာ နေရာကို ကွန်ဂရက်စ် Congress လို့ခေါ်တယ်။ မြန်မာပြည်မှာဆို ပါလီမန်ပေါ့။ အဲဒီကွန်ဂရက်စ်မှာ ဆီးနိတ် Senate ရယ်၊ House of Representatives ရယ်ဆိုပြီး နှစ်ပိုင်းရှိတယ်။ ဆီးနိတ်က ပိုမြင့်တယ်။ ဆီးနိတ်ကို အုပ်ချုပ်သူက ဒုသမ္မတဖြစ်တယ်။ ဆီးနိတ်ဥက္ကဌပေါ့ ။ ဆီးနိတ်ဥက္ကဌပြီးရင် ဒုဥက္ကဌကို President pro tempore လို့ခေါ်တယ်။ House of Representatives ရဲ့ ဥက္ကဌကို တော့ Speakers of the House of Representatives ကိုခေါ်တယ်။ အဲဒီ ဘဲကြီး သုံးယောက်ဟာ အမေရိကန်မှာ သမ္မတ လျောသွားတာဘဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ အလုပ်ပြုတ်တာဘဲဖြစ်ဖြစ် ၊အလုပ်ကသူ့သဘောနဲ့သူထွက်သွားတာဘဲဖြစ်ဖြစ်....တိုတိုပြောရရင် သမ္မတရုတ်တရက် မရှိတော့ရင် သမ္မတနေရာကို ဘယ်သူယူသင့်တယ်လို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ လိုင်း line of succession မှာ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ရဲ့ရှေ့မှာရှိတယ်။
3. အမတ်များအဖွဲ့ ဥက္ကဌ Speakers of the House of Representatives
သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ သမိုင်းမှာ ကက်သလစ်ဘုရင်တွေလို့ နာမည်ကြီးတယ်။ကက်သလစ်ဘုရင်ဆိုတာ ကက်သလစ်ဘာသာကို ယုံကြည်စွာနဲ့ ကိုးကွယ် ဖြန့်ဖြူးတဲ့ အုပ်ချုပ်သူတွေကို ပုဒ်ရဟန်းမင်းကြီးကိုယ်တိုင်က အပ်နှင်းတဲ့ဘွဲ့ဖြစ်တယ်။ အဲဒီခေတ်က ပုဒ်ရဟန်းမင်းကြီးဟာ ဥရောပဘုရင်တွေတော်တော်များများအပေါ်မှာ အာဏာလွှမ်းမိုးခဲ့လေတော့ သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ အဲဒီဘွဲ့ကို ရဖို့အရမ်းအားထုတ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီကနေ စပိန်စစ်ကြောရေးဆိုတဲ့ တရားရုံးပေါ်လာပါသတတ် ။ တိုတိုပြောရရင်တော့ သူတို့အုပ်ချုပ်တဲ့ တိုင်းပြည်ထဲမှာရှိတဲ့ ကက်သလစ်ခရစ်ယာန်မဟုတ်သူများအားလုံးကို ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တဲ့ တရားရုံးပါ။ ခရစ်ယာန်မှာတောင် ကက်သလစ်ဖြစ်မှ လွတ်တာ။ ဂျူးတွေ မွတ်စလင်တွေ တခြားခရစ်ယာန်ဂိုဏ်းကွဲကိုးကွယ်သူတွေဟာ ပြည်နှင်ဒဏ်မခံချင်ရင် ကက်သလစ်ဘာသာကို ပြောင်းရတယ်။ အဲလိုပြောင်းပြီးတဲ့သူတွေ သူတို့တကယ်ယုံကြည်ရာမူလဘာသာကို တိတ်တိတ်လေး ခိုးကိုးကွယ်နေမှာစိုးလို့ နည်းမျိုးစုံနဲ့ စွမ်းအားရှင်တွေသုံး၊ ဖော်ထုတ်၊ စစ်ဆေးတဲ့နေရာပါ။ ဆိုတော့ကာ အဲလိုဖမ်းပြီး စစ်တဲ့အခါသုံးတဲ့ နှိပ်စက်တဲ့ နည်းတွေထဲမှာ အထက်မှာ ပြောခဲ့တဲ့ waterboarding ဆိုတာလည်း ပါပါသတတ်။ ရေနဲ့နှိပ်စက်တာမို့ ကိုယ်ပေါ်မှာ ဒဏ်ရာမကျန်ခဲ့တာကြောင့်သိပ်ကို အကြိုက်တွေ့တဲ့နည်းပါ။နောက်ပိုင်းမှာစစ်ကြောရေးတွေတော်တော်များများက ဒီနည်းကို သုံးခဲ့ကြတယ်။ ဒီနည်းဟာ ဂျနီဗာ ကွန်ဗန်းရှင်း လူ့အခွင့်အရေးတွေကို ချိုးဖောက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒီတော့ရိုက်စ်တစ်ယောက် ဒီနည်းကို သုံးဖို့ စီအိုင်အေကို အာဏာပေးခဲ့တယ်လို့သတင်းထွက်လာတော့ အရမ်းကို နာမည်ပျက်ပါတော့တယ်။ အီရတ်စစ်ပွဲဖြစ်ဖို့အားပေးခဲ့သူလို့သတင်းကြီးနေတဲ့အချိန်မှာ ဒီသတင်းကလည်း ထပ်ဆင့်နာမည်ပျက်စေခဲ့တယ်။ ယခုအချိန်ထိ နိုင်ငံရေးက အနားယူသွားတာတောင် သူ့ကို ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဝေဖန်မှုတွေခံနေရတုန်းဖြစ်ပါတယ်။
ယောက်ျားတွေကြီးစိုးတဲ့ အိမ်ဖြူတော်ထဲရောက်လာတဲ့ ရိုက်စ်ဟာ သမ္မတဘုရ်ှရဲ့ အရေးပေးခြင်းခံရပေမယ့်စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့လည်း ကြုံရပါတယ်။ သူနဲ့မတည့်ဘူးလို့နာမည်ကြီးတဲ့တစ်ယောက်ကတော့ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ဒေါ်နယ်ရမ်းစ်ဖဲလ် Donald Rumsfeld ဆိုသူဖြစ်ပါတယ် ။ ရမ်းစ်ဖဲလ်က ရိုက်စ်ကို နိုင်ငံရေးသမားမဟုတ်ဘူး။ စာပေသမားသက်သက်။ ဆရာမလုပ်နေတာဘဲကောင်းတယ်။ အစိုးရအဖွဲ့မှာလုပ်ဖို့မကောင်းဘူး။ အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကို ဘာမှမသိဘူးလို့ ဝေဖန်တယ်။ ရိုက်စ်ကလည်း သူ့ရဲ့ စတန်းဖိုဒ်တက္ကသိုလ်ကို အုပ်ချုပ်ရတဲ့ အတွေ့အကြုံဟာ မနည်းပါဘူး၊ ရမ်းစ်ဖဲလ်ဟာ လူမှုရေးမှာ မညက်ဘူး လို့ ပြန်လည်ချေပသတဲ့။ ဒါတွေကတော့ အိမ်ဖြူတော်ကထွက်တဲ့သတင်းပါ။ အင်တာဗျူးတွေမှာတော့ ရိုက်စ်က သံတမန်ပီသစွာ ဒေါ်နယ်ရမ်းဖယ်လ်နဲ့ မတည့်တဲ့ ကိစ္စကို ဘယ်တော့မှမပြောပါဘူး။ မီဒီယာတွေအများဆုံးကိုးကားကြတာကတော့ တခါက ဒေါ်နယ်ရမ်းဖယ်လ်ဟာ ရိုက်စ်ခေါ်တဲ့ အစည်းအဝေးကို သုံးကြိမ်မြောက်ပေါ်မလာတာမို့ လူတွေရှေ့မှာ ရိုက်စ်ကဒေါသထွက်ပြီး ငိုတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒေါ်နယ်ရမ်းဖဲလ်ကို အဲဒီအကြောင်းမေးကြတော့သူက ရိုက်စ်ကို '' သူကဆရာမလေ၊ ထစ်ခနဲဆိုအစည်းအဝေးခေါ်ရတာဝါသနာပါတယ်။ လူတိုင်းကို တသဘောတည်းဖြစ်အောင်လုပ်ချင်နေတယ် '' လို့ဆိုသတဲ့။ ဘီဘီစီအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ ရိုက်စ်ကို အဲလိုငိုတယ်ဆိုတာ ဟုတ်လားလို့ ပေါ်တင်မေးတော့ ရိုက်စ်က မေးတဲ့သူကို ကျမပုံက အဲလို စိတ်ခံစားမှုကြောင့် ငိုတတ်တဲ့ပုံ ပေါက်နေလိုလား လို့ ပြန်မေးပြီး အဲဒီသတင်းမဟုတ်ကြောင်း၊ သူနဲ့ ရော်နယ်ရမ်းဖယ်တို့ဟာ အပြင်မှာ နှစ်ပေါင်းများစွာခင်မင်သူများဖြစ်ကြောင်း၊ ဒါပေမယ့်အိမ်ဖြူတော်အတွင်းမှာတော့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတို့ဆိုတာ သဘောထားကွဲလွဲတာတခါတလေ ဖြစ်တတ်တာမဆန်းကြောင်း ပြေပြေလည်လည် ဖြေတတ်ပါတယ်။ သို့သော်သူတို့နှစ်ယောက်ယှဉ်တွဲပြီးရိုက်ထားတဲ့ဓါတ်ပုံတစ်ချို့ထဲမှာတော့နှစ်ယောက်လုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပါဘဲ။
ကဲ..စာဖတ်သူတို့ရေ။ ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ ကွန်ဒိုလီဇာရိုက်စ်အကြောင်းကို အနည်းနဲ့ အများသိကြပြီလို့ ယူဆပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်ရေးအထုပ္ပတိတွေမှာတောင် အကြောင်းအရာတိုင်း အကုန်ထည့်ရေးတာမဟုတ်။ ဒီလို facebook က note ကလေးနဲ့တော့ဘယ်လိုမှမပြည်စုံနိုင်ပါ။ဖတ်သူများအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဆက်ပြီးသိချင်သေးရင် ရိုက်စ်ကိုယ်တိုင်ရေးအထုပ်ပတ္တိနှစ်အုပ်ရှိပါတယ်။ဒါက သူငယ်ငယ်ကအကြောင်းစာအုပ်။ ဒါကနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်က ကြီးစဉ်ဘ၀ အကြောင်း။ ရိုက်စ်နဲ့ မတော်တဆလမ်းမှာတွေ့ရင် ဒို့အတွက် စာအုပ်ကြော်ငြာခကော်မရှင်တောင်းပေးဖို့မမေ့နဲ့နော်....D:.....။
at 7:55 AM Posted by forevernadi No comments:
အမေရိကန်၏ ပထမဆုံးလူမဲ အမျိုးသမီး နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ကွန်ဒိုလီဇာရိုက်စ် သို့မဟုတ် အိမ်ဖြူတော်မှ ပန်းနက်တစ်ပွင့် (အပိုင်း ၁ )
၆၆ ယောက်မြောက် အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ကွန်ဒိုလီဇာရိုက်စ် ( ဟီလာရီကလင်တန်၏အရှေ့)
ကွန်ဒိုလီဇာရိုက်စ် ဆိုတဲ့ နာမည်ကို ကြားရင် ချစ်သူထက် မုန်းသူများမှာ သေချာသလောက်ပါဘဲ။ မုန်းဆို သူ့ကို အီရတ်စစ်ပွဲဖြစ်အောင် မွှေသူတွေထဲက တစ်ယောက်လိုိ့ယူဆသူတွေ မနည်းဘူးကိုး။ အထူးသဖြင့် အီရပ်စစ်ပွဲမှာ ကျဆုံးသွားတဲ့ အမေရိကန်နဲ့အမေရိကန်ဘက်က၀င်တိုက်လို့ကျသွားတဲ့ဥရောပ သြစတြေးလျ စတဲ့နိုင်ငံတွေကစစ်သားတွေရဲ့ကျန်ရစ်သူမိသားစုတွေအတွက်ပေါ့။ စီအိုင်အေထောက်လှမ်းရေးသတင်းတွေက ဆာဒမ်ဟူစိန်ဆီမှာ နျူကလီးယားမရှိဘူးလို့ပြောတာကို ရိုက်စ်ကလက်မခံဘဲ ခေါင်းမာစွာနဲ့ ငြင်းခဲ့လို့စစ်ဖြစ်ရတာလို့ယုံကြည်သူတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲဒီစစ်ကြောင့် လူတွေများစွာသေကြရသလို စစ်စရိတ်လည်း ဒေါ်လာသန်းထောင်နဲ့ချီကုန်ပြီး တိုင်းပြည်စီးပွားရေးကို အကြီးအကျယ်ထိခိုက်ခဲ့တယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ နျူးကလီးယားလည်းမတွေ့စစ်ကြောင့်စတေးလိုက်ရတဲ့ဆုံးရှုံးမှုကလည်း မနည်းတော့ဘုရ်ှအစိုးရရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာဟာ ကုန်းကောက်စရာမရှိအောင်ကျပြီး အကြီးအကျယ်နာမည်ပျက်ရသူတွေထဲမှာ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့ ကွန်ဒိုလီဇာရိုက်စ်က ထိပ်ဆုံးမှာပါပါတယ်။်။သူ့ကို စစ်ရာဇ၀တ်ကောင် ဆိုပြီး ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြပွဲတွေ အမေရိကန်နေရာအနှံအပြားမှာ ဖြစ်ခဲ့တယ်။
၂၀၀၇ မှာ အရှေ့အလယ်ပိုင်းကိစ္စနဲ့ ကွန်ဂရက်စ် မှာ အစစ်ခံဖို့ ၀င်လာတဲ့ ရိုက်စ်ကို သွေးပေတဲ့လက်လို ဖြစ်အောင် အနီသုတ်ထားတဲ့ လက်နဲ့ စစ်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားသူအမျိုးသမီးတစ်ဦးက စောင့်ပြီး မင်းဟာ စစ်ရာဇ၀တ်ကောင်ဘဲ လို့ အော်ဟစ်ခဲ့ပါတယ်။ လုံခြုံရေးရဲတွေက အချိန်မီတားပြီး အမျိုးသမီးကို အတင်းခေါ်ထုတ်သွားပေမယ့် ခန်းမတစ်ခုလုံး ရုတ်ရုတ်သဲသဲ ဖြစ်သွားခဲ့စဉ် ။
အခုထိတိုင် နိုင်ငံရေးက အနားယူသွားပေးမယ့်သူသွားလေရာမှာ ဝေဖန်မှုတွေနဲ့ မပြတ်တွေ့နေရဆဲပါ။ ဒါပေမယ့်ကောင်းတဲ့သူတိုင်း အကုန်ကောင်းနိုင်ခဲသလို ဆိုးတဲ့သူတိုင်းလည်း အကုန်ဆိုးတယ်လို့မရှိပါဘူး။ သူမဟာ လေးစားဦးညွှတ်စရာကောင်းတဲ့သူမဟုတ်ပေမယ့် အင်မတန်အနှိမ်ခံရတဲ့ လူမည်းဘ၀ကနေ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ပါလေရာ ငါးပိချက် လူတွင်ကျယ် လုပ်နိုင်တဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရာထူးထိ ရောက်အောင် လှမ်းတက်နိုင်ခဲ့တဲ့ အတွက် အားကျချီးကျူးသူတွေကတော့ ဒုနဲ့ ဒေးပါဘဲ။လူမဲတွေထဲက နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတက်ဖြစ်တဲ့ ပထမဆုံးလူမဲအမျိုးသမီးဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာကျော် တိုင်းမဂ္ဂဇင်းကြီး က နှစ်စဉ် ပြုစုတဲ့ ကမ္ဘာ့ သြဇာအရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ် ၁၀၀ စာရင်း ( list of the world's 100 most influencial people ) မှာ ၄ ကြိမ်ဖော်ပြခြင်းခံရဖူးတယ်။ ကမ္ဘာကျော် Forbes မဂ္ဂဇင်းကြီးက ရိုက်စ်ကို ၂၀၀၄ နဲ့ ၂၀၀၅ ကမ္ဘာ့ သြဇာအကြီးဆုံး အမျိုးသမီး ( the most powerful woman in the world ) အဖြစ် ဖော်ပြခဲ့ဖူးတယ်။
အခုလက်ရှိ နိုင်ငံရေးကအနားယူသွားပေမယ့် ပညာရေးလောကမှာ ထိတ်ထိတ်ကျဲ ဟားဗတ်ကဲ့သို့တက္ကသိုလ်ကြီးတွေက တကူးတကဖိတ်ကြားခံရတဲ့နိုင်ငံရေး သိပ္ပံပညာရှင်ပါ။ သူသွားပြီး ဟောပြောတဲ့ တက္ကသိုလ်တွေမှာ အမြဲတမ်းလိုလို ခန်းလုံးပြည့်လာနားထောင်ကြသလို အခန်းပြင်ကနေ သူ့ကို ဆန္ဒပြကန့်ကွက်တဲ့သူတွေလည်း အမြဲတမ်းရှိပါတယ်။ ကဲ..ဒီလို လူတွေကို အားလည်းကျစေ မုန်းလည်း မုန်းစေတဲ့ ကွန်ဒိုလီဇာရိုက်စ်အကြောင်းကို တို့အားလုံးကို အထောက်အကူ ပြုမယ့်ဘက်ကနေ လေ့လာကြည့်ရအောင်။( သပွတ်အူလို ရှုပ်တဲ့နိုင်ငံရေးတွေကိုတော့ ခဏဘေးဖယ်ထားလိုက်ကြစို့။ စီအိုင်အေထောက်လှမ်းရေးဘာလုပ်တယ်ဆိုတာ သမ္မတတောင် အကုန်သိတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးမဟုတ်လား။ ဒို့လို ပိစိကွေးလေးတွေကအဖို့တော့ ရှိတဲ့ဦးနှောက်လေးတွေကို အကျိုးရှိရာမှာ သုံးပြီး အတုယူစရာလေးတွေ ရှာကြည့်ရအောင်။ )
ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်ဟောပြောပွဲတစ်ခုမှ ရိုက်စ် ။
အမည်အပြည့်အစုံ ...........ကွန်ဒိုလီဇာ ရိုက်စ် ( Condoleezza Rice )
မျိုးရိုးအမည် .....ရိုက်စ် ( Rice )
မွေးရပ်ဇာတိ .....ဘာမင်ဟန်မြို့ ( Birmingham ) ၊အာလာဘားမား ( Alamabama ) ပြည်နယ် ၊အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု
မွေးသက္ကရစ် .....၁၉၅၄ နိုဝင်ဘာ ၁၄
ပညာအရည်အချင်း ....နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ( B.A and Ph.D in Political Science , University of Denver )
.....( M.A in Political Science ,University of Notre Dame )
ပညာရေးရာထူး ......Professor,Provost at Standford University
နိုင်ငံရေးရာထူး ......ဆိုဗီယက်အရေး ကျွမ်းကျင်သူ Soviet expert ( Bush Senior လက်ထက် )
......သမ္မတ George W.Bush လက်ထက် နိုင်ငံတော် လုံခြုံရေး အကြံပေး National Sicurity Advisor
......သမ္မတ George W.Bush လက်ထက် နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး Secratary of State
ကွန်ဒိုလီဇာရိုက်စ်ရဲ့ အကြောင်းကို ပြောရရင် သူ့ရဲ့ လူမဲဇစ်မြစ်ကို ချန်ထားလို့မရပါဘူး။ သူ့အဖိုးအဖွားတွေဟာ ကျွန်ခေတ်မှာ မွေးတဲ့ လူမဲတွေ ဖြစ်ပြီး သူ့အဖေအမေလက်ထက်မှာလည်း ကျွန်ခေတ်မပျောက်သေးပါဘူး။ သူ့အဖေရဲ့ အဖွား ( ရိုက်စ်ရဲ့ အဖီး) ဟာ ကျွန်ပေမယ့် ကံကောင်းချင်တော့ စာဖတ်တတ်သူ ဖြစ်တယ် ။ မျက်စိတစ်ဆုံးမြင်တတ်တဲ့ ရိုက်စ်ရဲ့ အဖီးဟာ အဲဒီခေတ်မှာ ကျွန်ဖြစ်ရပေမယ့် သူ့ရဲ့ နောက်မျိုးဆက်တွေ လွတ်လပ်သူတွေအဖြစ် နေနိုင်ဖို့အတွက် ပညာရေးဟာ သိပ်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကို သိခဲ့တယ် ။ပညာတတ်ရင် ဘ၀ကို ပြောင်းလဲနိုင်တယ်လို့ လုံးဝယုံကြည်သူဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် သူ့သားသမီးတွေအားလုံး (ရိုက်စ်အဖိုးအပါအ၀င် ) ကို စာဖတ်တတ်အောင် သင်ပေးခဲ့တယ် ။ ရိုက်စ်ရဲ့အဖိုး ဂျွန်ဟာလည်း သူ့အမေရဲ့ ကျေးဇူးကြောင့် စာဖတ်တတ်ခြင်း ဆိုတာကို အင်မတန်မှ တန်ဖိုးထားခဲ့တယ် ။ အခုဒီစာကို ဖတ်နေသူတွေအားလုံးဟာ စာဖတ်တတ်လို့သာ ဒီအကြောင်းကို ဖတ်နေတာပေါ့နော် ။ ဒီတော့ ကျမတို့ဟာ ရိုက်စ်ရဲ့ ဖိုးဖိုးဖီးဖီးတွေ တခုတ်တရ သင်ခဲ့ရတဲ့ စာဖတ်တတ်ခြင်းဆိုတာကို ပိုင်ဆိုင်ထားတယ် ။ အဲဒီ စာဖတ်တတ်ခြင်း ဆိုတာကြီးဟာ အင်မတန် တန်ဖိုးကြီးတယ်ဆိုတာမမေ့ဖို့ သတိပေးပါရစေ။ ဒီစာဖတ်တတ်ခြင်းဆိုတဲ့ သော့နဲ့ ဗဟုသုတုတံခါးပေါက်တွေကို တစ်ပေါက်ပြီးတစ်ပေါက် ဖွင့်သွားပြီး ဘ၀ကို ပြောင်းလဲနိုင်လို့ပါဘဲ။
ဆက်ပြောရရင် စာဖတ်တတ်တဲ့ ရိုက်စ် ရဲ့ အဖိုး ဂျွန်ဟာ လယ်ငှားလုပ်သူပါ။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း လယ်ထဲမှာ ရုန်းရပေမယ့် အတန်းစာဆယ်တန်းကို မဖြစ်ဖြစ်အောင် တက်ခဲ့တယ် ။ ၁၉ နှစ်သားမှာ ဂျွန်ဟာ ကောလိပ်တက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ လူမဲတစ်ယောက်ဟာ ကောလိပ်ကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့ တက်လို့ရသလဲဆိုတာကို သူဟာ စတင်စုံစမ်းပါတော့တယ်။ ဒီတော့ သူတို့နေတဲ့ မြို့လေးနဲ့ မိုင် ၃၀ လောက်အကွာမှာ ဘာသာရေးကောလိပ်တစ်ခုရှိတယ်ဆိုတာကို သိလာတယ် ။ ဒီတော့သူဟာ အဲဒီမှာ ပထမနှစ်ကို သွားတက်တယ်။ ပထမနှစ်စာသင်ခအတွက် သူလယ်ကထွက်တဲ့ ၀ါဂွမ်းကို ပေးလိုက်ရတယ် ။ ဒုတိယနှစ်ကျတော့ ပေးစရာ ၀ါဂွမ်းမကျန်တော့ဘူး ။ကျောင်းကလည်း သူ့ကို ဒီအတိုင်းတော့ အလကားပေးမတက်နိုင်ဘူးလို့ ပြောလာပါတယ် ။ဒီတော့ သူဟာ အခကြေးငွေမပေးရဘဲ ကောလိပ်ဆက်တက်ရမယ့်နည်းကို စုံစမ်းကြည့်တော့ သင်းအုပ်ဆရာလုပ်ရင်တော့ ပညာသင်ဆုကို ရနိုင်တယ်လို့ပြောကြတယ်။ ဒီတော့သူက --ဟာ ..အတော်ဘဲ ။ ကျနော်လည်း သင်းအုပ်ဆရာ လုပ်ချင်နေတာနဲ့ --ဆိုပြီး ချော်လဲရောထိုင်လုပ်လိုက်ပါသတဲ့ ။ဒီလိုနဲ့ဘဲ သူ ဟာ ပညာတတ်ချင်တဲဇောနဲ့ သင်းအုပ်ဆရာဖြစ်လာတယ် ။ သူ့ရဲ့ပညာရေးကို အင်မတန် တန်ဖိုးထားခဲ့ခြင်းဟာ ရိုက်စ်အပါအ၀င် နောက်ပိုင်းမျိုးဆက်တွေ ထိတ်ထိတ်ကြဲ ပညာတတ်ဖြစ်လာရခြင်းရဲ့ အဓိက အကြောင်းတစ်ခုပါဘဲ ။ ရိုက်စ်တစ်ယောက်တင် အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ ထိပ်တန်းရာထူးမျိုးကို ရခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ သူ့ရဲ့ မောင်နှမ၀မ်းကွဲတွေထဲမှာ ရှေ့နေတွေ၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့ ထိတ်တန်းနေရာရထားသူတွေ၊ တက္ကသိုလ်ဆရာဆရာမတွေ ပါပါတယ်လို့ ရိုက်စ်က အင်တာဗျုးတွေမှာ မကြာခဏ ပြောလေ့ရှိတယ် ။
ကျွန်ခေတ် ၀ါခင်းထဲမှ လူမဲကျွန်များ
ဂျွန်ဟာ သင်းအုပ်ဆရာပေမယ့် ဘာသာရေးကိုချည်း ဟောပြောနေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ သူ့ဘုရားကျောင်းလေးရဲက ဘေးမှာ Sunday School ဖွင့်ပြီး ကလေးတွေကို ပညာသင်ပေးတယ်။ သူပြောင်းရတဲ့ နေရာတိုင်းမှာ ဘုရားကျောင်းဘေးမှာ Sunday School ကို မဖြစ်မနေဖွင့်တယ်။ သူကိုယ်တိုင် ကျောင်းဆရာဆရာမတွေနဲ့ သွားပြီး ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်တယ်။ကလေးကို ကျောင်းမထားတဲ့ မိဘတွေရဲ့အိမ်ကို ကိုယ်တိုင်သွားပြီး ကလေးကိုကျောင်းထားဖို့ပြောတယ်။ ကလေးတွေအတွက်ပညာသင်ဆုရအောင် လုပ်ပေးတယ်။ ဆရာ ဆရာမတွေကလည်း သူ့ရဲ့ Sunday School မှာလာပြီး ကူညီကြတယ်။
သူ့သားသမီးအရင်းတွေဖြစ်တဲ့ရိုက်စ် အဖေနဲ့ အဒေါ်တို့ ပညာတတ်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာ ပြောဖို့လိုမယ်မထင်တော့ပါဘူးနော် ။ရိုက်စ်အဖေက ကောလိပ်တတ်ပြီး သင်းအုပ်ဆရာဖြစ်လာပြီး ပညာဖြန့်ဖြူးရေးအလုပ်ကို ဆက်လုပ်ခဲ့တယ်။ ရိုက်စ်ရဲ့ အဒေါ် တေရေဇာ ကတော့ ပညာအရာမှာပိုပြီး လျှမ်းလျှမ်းတောက် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူဟာ တက္ကသိုလ်ဒီဂရီထိရခဲ့ပြီး ၁၉၅၂ မှာ အင်္ဂလိပ် ဗစ်တိုးရီးယန်းစာပေ ( Victorian literature ) နဲ့ Ph.D ဘွဲ့ကို ရခဲ့တဲ့ ပထမဆုံး လူမဲအမျိုးသမီးဖြစ်လာတယ် ။ ဗစ်တိုးရီယန်းခေတ်မှာ လျှမ်းလျှမ်းတောက်ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ စာရေးဆရာ Charles Dickens အကြောင်းကို စာအုပ်တွေ ရေးခဲ့တယ်။
ကွန်ဒိုလီဇာ ရိုက်စ်နဲ့ သူ့အမေ
ရိုက်စ်ဟာ အခု အချိန်ထိ သူ့အဖိုးအကြောင်းကို တသသ ပြောနေရတဲ့ အကြောင်းတစ်ခုရှိတယ် ။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီးမှာ ၂၀ ရာစုရဲ့ အကြီးဆုံး စီးပွားပျက်ကပ်ကြီးဆိုက်ရောက်လို့လူတွေငတ်ပြတ်နေချိန်မှာ ရိုက်စ်အဖိုးဟာ တစ်နေ့ တော့ရွှေရောင်ဖောင်းကြွစာလုံးတွေပါပြီး သားရေအဖုံးတပ်ထားတဲ့ရှိတ်စပီးယား၊ ဗစ်တာဟူဂို နဲ့တခြားနာမည်ကြီးစာရေးဆရာတွေရေးတဲ့ စာအုပ်ကြီးကိုးအုပ်ပိုက်ပြီး ၀မ်းသာအားရ အိမ်ပြန်လာတယ်။ သူ့မိန်းမဖြစ်သူက ခေတ်ပျက်ကြီးထဲမှာ မိသားစုစားဝတ်နေရေးကို စီမံနေရသူပီပီ အဲဒါတွေ ရှင်ဘယ်လောက်ပေးပြီး ၀ယ်လာတာလဲ လို့ အလန့်တကြားမေးပါတယ် ။ ဒေါ်လာ ၉၀ ပါတဲ့ ( လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၈၀ လောက်က ဒေါ်လာ ၉၀ ရဲ့ တန်ဖိုးကို မှန်းကြည့်ပါ )။ စိတ်မပူပါနဲ့ မိန်းမရယ် ။တစ်လ ၃ ဒေါ်လာနှုန်းနဲ့ သုံးနှစ်လောက် ဆပ်ရင် ကျေသွားမှာပါ တဲ့ ။ သူ့မိန်းမက အတင်းပြန်သွားပေးခိုင်းပေမယ့် သူခေါင်းမာစွာနဲ့ ယူထားလိုက်တယ် ။အဲဒီစာအုပ်တွေထဲက အသက်နဲ့ကိုယ် မြဲနေခဲ့တဲ့ ငါးအုပ်ဟာ အခုထက်ရှိ Standford တက္ကသိုလ်က ရိုက်စ်ရဲ့ ရုံး ဧည့်ခန်းထဲက စားပွဲပေါ်မှာ ရှိနေပါသေးတယ် ။ ရိုက်စ် နိုင်ငံရေး သိပံ္ပနဲ့ Ph.D ရတဲ့နေ့မှာ ရိုက်စ် အဖေက ဒီစာအုပ်တွေကို လက်ဆောင်အနေနဲ့ လက်ဆင့်ကမ်းခဲ့တာပါ ။
ဖေဖေ မေမေ နဲ့ ရိုက်စ်
ရိုက်စ် အမေဘက်ကလည်း ပညာနဲ့ပတ်သက်ရင် မခေပါဘူး။ ရိုက်စ် အမေဖက်က အဖိုးဟာ ကောလိပ် ပညာတတ်တော့မဟုတ်ခဲ့ဘူး။ ဒါပေမယ့်စီပွားရေးတော့ အမျိုးမျိုးလုပ်တတ်ခဲ့တယ်။ ကျောက်မီးသွေးကျင်းမှာ အင်ဂျင်နီယာအဖြစ်လုပ်ခဲ့ပြီး ပိတ်ရက်တွေမှာ အိမ်တွေလိုက်ဆောက်ပေးတယ် ။အခါအာလျော်စွာလည်း ပန်းပဲအလုပ်ကို လုပ်လေ့ရှိတယ် ။ ရိုက်စ်အဖွားကတော့ သူ့ခေတ်မှာဆို ပညာတတ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ဂီတကျောင်းဆင်းဖြစ်ပြီး စန္ဒရားကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်သင်ယူတတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ သူတို့ခေတ်မှာ ဒီလောက်တတ်တာဟာ နည်းတဲ့အဆင့်မဟုတ်ပါဘူး။
အမေနဲ့ အဖွားကဲ့သို စန္ဒရားဝါသနာပါသူ
ဒီနေရာမှာ ရီစရာလည်းကောင်း အတုယူစရာလည်း ကောင်းတဲ့အဖြစ်တစ်ခုရှိပါတယ်။ ရိုက်စ်အမေမှာ မောင်နှမငါးယောက်ရှိတာ နှစ်ယောက်ဘဲ ပညာကို တည့်တည့်မတ်မတ် ရှောရှော ရှူရှူ ဆုံခန်းတိုင်ခဲ့တယ်။ နောက်သုံးယောက်ဖြစ်တဲ့ ရိုက်စ်ရဲ့ဦးလေးနှစ်ယောက်နဲ့ အဒေါ်တစ်ယောက်ဟာ ပညာတစ်ပိုင်းတစ်စမှာ လမ်းလွဲမလိုဖြစ်ခဲ့တယ် ။ အကြောင်းကတော့ ရိုက်စ်ရဲ့ ဦလေးတစ်ယောက်ဟာ ကောလိပ် တစ်ဝက်တစ်ပျက်မှာ အိမ်ထောင်ကျ ကလေးတစ်ယောက်ရပြီး တခြားနယ်ကို စီးပွားရှာဖို့ထွက်သွာခဲ့ပါသတဲ့။ သားသမီးတွေအားလုံး ပညာတတ်ဖြစ်ရမယ်လို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားတဲ့ ရိုက်စ် အဖိုးဟာ သူ့သားထွက်သွားတဲ့ ပင်စာဗေနီးယားပြည်နယ်ထိ တကူးတကကို ပြန်လိုက်ခေါ်ပြီး ကောလိပ်ကို ပြန်အပ်ခဲ့တယ်။ ပညာသင်ဆုလျောက်ပေးခဲ့တယ် ။ဒီလိုနဲ့ရိုက်စ် ဦလေးဘွဲ့ရသွားခဲ့တယ်။ နောက်ဦးလေးတစ်ယောက်ကလည်း တက္ကသိုလ်ကို ရောက်ပြီးမှ တစ်ဝက်တစ်ပျက်နဲ့ ကျောင်းထွက်သွားပြန်ပါတယ် ။ရိုက်စ်တို့ အဖိုးဟာ အရင်နည်းအတိုင်း သားကိုလိုက်ခေါ် ကျောင်းပြန်အပ် ပြီး ဘွဲ့ရစေခဲ့တယ် ။ နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ရိုက်စ်အဒေါ်လည်း ထို့နည်းလည်းကောင်းပါဘဲ၊ ကျောင်းကထွက်ပြီး နယူးယောက်က ချစ်ချစ်ဆီကို ထွက်သွားပါသတဲ့ ။ ရိုက်စ်တို့အဖိုးလည်း ဘာရမလဲ ။ အရင်လိုဘဲ ရထားတတန်စီးပြီး သမီးကို လိုက်ခေါ် ကောလိပ်ပြန်ပိုလိုက်တာ့နောက်ဆုံး ကောလိပ်ဘွဲတင်မက မာစတာဘွဲ့တင်မကဘဲ Ph.D အထိရလို့ အခုဆို ဆရာမဖြစ်နေပါပြီ ။ဒီလောက်ဆိုရင် ဟောဒီစာရဲ့ ဇာတ်လိုက်မမ ဖြစ်တဲ့ ကွန်ဒိုလီဇာရိုက်စ်ရဲ့ ဘိုးဘွားဆွေမျိုးတွေအကြောင်းကို ပရိသတ်ကြီး ရိပ်ဖမ်းသံဖမ်းတော့သိကြပြီလို့ ထင်ပါတယ် ။ဟုတ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ ပညာအတွက်ကို ဘာမဆိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အထဲမှာ ပါပါတယ်။( တင်စားပြီးပြောတာနော်။ ပညာအတွက်ဆို ဟိုဟာကောလုပ်မလား ဒီဟာကောလုပ်မလား။ စပွန်ဆာကောယူမလားလို့ ကပ်မတွေးပါနဲ့ဦး။ ပြောချင်တာလမ်းလွဲကုန်ဦးမယ်။ )။
ပြောချင်တာက ဘိုးဘေးတွေလက်ထက်မှာ သူများခိုင်းဖတ်ကျွန်ဖြစ်ခဲ့ရတယ် ။ အဖေတွေလက်ထက်မှာ လူမဲတွေလွတ်လပ်ရေး ရလာပြီဆိုပေမယ့် အဖိနှိပ်ခံရတုန်းပါဘဲ ။ဒီဘ၀တွေက လွတ်ဖို့ပညာသာကိုးကွယ်ရာဆိုတာကို သဘောပေါက်တဲ့ လူတွေပါ ။ပညာရဲ့ ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ ပါဝါအပေါ်မှာ အကြွင်းမဲ့ယုံကြည့်ခဲ့ကြတယ်။ယုံကြည်တဲ့ အတိုင်းလည်း ဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့ကြတယ်။ ဘယ်လောက်များလည်းဆိုရင် ရိုက်စ်ငယ်ငယ်တုန်းက ရှိစုမဲ့စုပိုက်ဆံနဲ့ မကြာခဏဆိုသလို မိသားစုပျော်ပွဲစားထွက်ကြပါသတဲ့။ သူ့အဖေနဲ့ အမေဟာ တစ်ဦးတည်းသောသမီးရိုက်စ်တင်မက ရိုက်စ်ရဲ့ဝမ်းကွဲမောင်နှမတွေကိုပါ သူတို့ပျော်ပွဲစားထွက်တာမှာခေါ်သွားလေ့ရှိတယ်။ ပျော်ပွဲစားထွက်တယ်ဆိုလို့ မြကျွန်းသာတို့ ဟက်ပီးဝေါလ်တို့ သွားတယ်ထင်လားဟင် ။ ကလေးတွေကို ကောလိပ်တွေ တက္ကသိုလ်တွေရဲ့ Campus တွေကို သွားပြကြတာပါတဲ့။ တခါတလေ သူတို့မြို့နဲ့ မိုင်ရာချီဝေတဲ့တက္ကသိုလ်ကောလိပ်တွေကို လိုက်ပြလေ့ရှိတယ်။ ကောလိပ်ဆိုတာ တစ်ချိန်မှာ မဖြစ်မနေသွားရမယ့်နေရာတစ်ခုလို့ကို ကလေးတွေရဲ့ ခေါင်းထဲမှာ စွဲနေစေခဲ့တယ်။ ရိုက်စ် အင်တာဗျူးတွေမှာ သူ့ဘ၀အကြောင်းကို ပြောတိုင်း မကြာမဏထည့်ပြောလေ့ရှိတာက '' ကျမမိဘတွေက ကျမကို ကောလိပ်တက်ချင်သလား'' လို့ဘယ်တော့မှ မမေးပါဘူး ။ '' ဘယ်ကောလိပ်ကိုတက်မလဲ '' လို့သာ မေးတာပါ တဲ့။ ရိုက်စ်နဲ့ အတူပညာသင်ခဲ့တဲ့ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေဟာလည်း အခုဆိုရင် ပညာတတ်တွေ ဖြစ်လို့ ရာထူးကြီးကြီးတွေမှာ တင့်တင့်တယ်တယ် နေနိုင်ကြသူတွေပါ ။သူတို့အားလုံးတစ်ညီတစ်ညွတ်ထဲ ပြောလေ့ရှိတာကတော့ ရိုက်စ် မိဘ တွေရဲက ကျေးဇူးဟာ သူတို့အပေါ်အများကြီးတင်နေပါတယ် တဲ့။
အသက် ၃၈ နှစ်တွင် Standford တက္ကသိုလ်၏ အသက်အငယ်ဆုံးအမျိုးသမီး provost ဖြစ်စဉ်
ရိုက်စ်အဖေရဲ့ ဘုရားကျောင်းမှာ အင်္ဂါနဲ့ ကြာသာပတေးနေ့ညတိုင်းလည်း ကျောင်းတွေက ဆရာဆရာမတွေလာပြီးလုပ်အားပေးကြတယ်။ သင်္ချာ၊ သပံ္ပ ၊ ဘာသာစကားတွေကို သင်ပေးကြတယ်။ ရိုက်စ်အမေက စန္ဒရားနဲ့အင်္ဂလိပ်စာသင်တယ်။ အနီးအနားက ကလေးတွေနဲ့ တရုံးရုံးပါဘဲ။ ဒီလိုနဲ့ အနီးအနားက ပိုက်ဆံမဲ့အနှိမ်ခံလူမဲတွေအားလုံးအတွက် ပညာရေးအ၀န်းအ၀ိုင်းကို ဖန်တီးပေးခဲ့တယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ ရိုက်စ်တို့ အာဖရိကကလာတဲ့လူမည်းခရစ်ယာန်တွေက ဘုရားကျောင်းမှာ သီချင်းမြူးမြူးကြွကြွတွေနဲ့ ကခုန်တာလုပ်လို့ရတယ်။ ဒါတွေကလည်း ကလေးတွေကို ဆွဲဆောင်မှု ဖြစ်စေခဲ့တယ်။ ရိုက်စ်အဖေကိုယ်တိုင် ( ရိုက်စ်အဖိုးလုပ်ခဲ့သလို ) အိမ်တွေကို သွားပြီး ကလေးတွေကို ကျောင်းပို့ဖို့ မိဘတွေကို ပြောတယ်။ ပညာသင်ဆုတွေလျောက်ပေးတယ်။ သူတို့သင်ပေးလိုက်တဲ့ကလေးတွေဟာ နောက်ပိုင်းမှာ နာမည်ကြီး အားကစားသမားတွေ၊ တက္ကသိုလ်ကျောင်းအုပ်တွေ ၊ပူလစ်ဇာဆုရ စာရေးဆရာတွေ ၊နာမည်ကြီး ဂျာနယ်လစ်တွေ ၊ ဆေးရုံအုပ်တွေ စာကြည့်တိုက်မှုးတွေ ဖြစ်လာခဲ့ကြတယ် ။
၂၀ ရာစု၏ အတော်ဆုံး baseball သမား Wille Mays ( ရိုက်စ်တို့Sunday School ထွက် ၊လူမဲ )
ဒီလို ပညာနံ့သင်းထုံတဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းဖြစ်အောင် လုပ်ရတာ မလွယ်ပါဘူး။ ဒီလောက်လုပ်ပေးမှတော့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး တက်ဖြစ်တာ မဆန်းပါဘူးလေ ..ငါသာဆို သမ္မတလောက်တော့အသာလေး ဖြစ်ပါတယ်လို့ စာဖတ်သူ တွေးနေလောက်ပြီနဲ့တူတယ်။ တွေးပါ။ တွေးပါ။ တားပါဘူး။ လေထဲတိုက်အိမ်ဆောက်ရတာ ပိုက်ဆံပေးရတာ မှတ်လို့။ ဒါပေမယ့် ရိုက်စ်မွေးလာတဲ့ ခေတ်ကို နည်းနည်းလေ့လာကြည့်ရအောင်။
လူမဲတွေကို အကြမ်းဖက်နှိပ်ကွပ်သော လူဖြူများ။
ကျွန်စနစ်ကို ပျက်သုန်းသွားစေတဲ့ အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်ဟာ ၁၈၆၅ မှာပြီးတယ်။ ဒီတော့ ရိုက်စ်မွေးတဲ့ ၁၉၅၄ မှာ လူမည်းတွေလွတ်လပ်ရေးရတာ အတော်ကြာလှပေါ့။ဒါပေမယ့် လူမျိုးရေးစိတ်ဓါတ်ပြင်းထန်တဲ့ ကျွန်စနစ်ကို လိုလားတဲ့ လူဖြူတွေဟာ စစ်ပြီးကတည်းက နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ လူမည်းတွေကို နှိပ်ကွပ်လာလိုက်တာ ရိုက်စ်ကို မွေးလို့တော်တော်ကြာတဲ့အထိပါဘဲ ။အစိုးရအဖွဲ့ထဲမှာကို လူမဲမုန်းသူတွေပါနေတော့ကြောင့် ဒီနှိပ်ကွပ်မှုဟာ နှစ်ရာချီ ကြာနေခဲ့တယ် ။စစ်ပြီးပြီးချင်းကို လူဖြူအကြမ်းဖက်တွေ ပေါ်လာလို့ လူမည်းတွေဟာ ကျီးလန့်စာစား ဖြစ်နေခဲ့ရတယ်။
ရဲကပါ လူမဲကို နှိပ်ကွပ်နေပုံ
ရိုက်စ်ကို မွေးတဲ့ အာလာဘားမားပြည်နယ်ဟာ ကျွန်စနစ်ခေတ်စားခဲ့ရာ အမေရိကန်တောင်ပိုင်းမှာရှိတယ်။ ရိုက်စ်တို့ ဘာမင်ဟန်မြို့မှာလည်း လူမည်းတွေ အများကြီးရှိတော့အဲဒီနှိပ်ကွပ်မှုတွေကို ခါးဆီးခံခဲ့ကြရတယ်။ ရိုက်စ် ၁၁ နှစ်အရွယ်မှာ အကြမ်းဖက်တွေက ရိုက်စ်တို့ဘုရားကျောင်းလေးနားက ဘုရားကျောင်းကြီးတစ်ခုကို ဒိုင်းနမိုက်နဲ့ဖောက်လို့ လူမဲလေးယောက်သေတဲ့အထဲမှာ သူ့အတန်းဖော်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ပါသွားတယ်။ ညတွေမှာ မျက်နှာကို အုပ်ထားတဲ့လူတွေဟာ အိမ်တွေကို ၀င်စီး ပစ္စည်းယူ လူသတ်တာတွေကိုလုပ်တယ်။
အသတ်ခံထားရသောလူမဲများအား လူစဉ်ကားရာနေရာများတွင်ထားခြင့်ဖြင့် ချောက်လှန့်စဉ်
သတ်ထားတဲ့ လူသေအလောင်းတွေကို လူစည်ကားရာနေရာတွေမှာ ကားစင်တင်တာတို့ သစ်ပင်မှာ ချိတ်ဆွဲတာတို့လုပ်ပြီး လူမဲတွေကို ခြောက်လှန့်ခဲ့တယ်။ အစိုးရအဖွဲ့မှာ လူမည်းတွေကို မလိုလားတဲ့ ဒီမိုကရက်တွေအာဏာရလာတော့ လူမည်းတွေကို ခွဲခြားဆက်ဆံရေး ပိုပြင်းထန်လာခဲ့တယ်။ အဲဒီမှာတင် Jim Crow Law ဆိုတဲ့ ဥပဒေပေါ်လာပါတော့တယ်။ အဲဒီဥပဒေအကြောင်းနည်းနည်း လျှာရှည်ပါရစေ။ဟဲဟဲ..ဖတ်လက်စနဲ့တော့မထူးပါဘူး။ ဆက်ဖတ်လိုက်ပါနော်။ ဗဟုသုတပေါ့ ။
Jim Crow ဆိုတဲ့နာမည်က Jump Jim Crow ဆိုတဲ့ သီချင်းကလာတာပါ။ တိုတိုပြောရရင် လူမည်းတွေကို နှိမ်တဲ့သီချင်းပေါ့။ ဟိုးအရင် ကျွန်ဝါဒရှိကတည်းက လူဖြူလူရွှင်တော်တစ်ယောက်ကဆိုခဲ့တဲ့သီချင်းပါ။ သိကြတဲ့အတိုင်း Crow ဆိုတာ ကျီးကန်းမဟုတ်လား။ လူမည်းတွေကို ဆိုလိုတာပေါ့။ ဒီသီချင်းပေါ်လာပုံကို ဘယ်သူမှအသေအချာမသိပေမယ့် အရပ်စကားတစ်ခုကို ကိုးကားရရင်တော့ တစ်ခါက ကျီးကန်းတွေကို ဖမ်းချင်တဲ့ လယ်သမားတစ်ယောက်ဟာ ရွှေဥာဏ်တော်စူးရောက်စွာနဲ့ အရက်စိမ်ထားတဲ့ ပြောင်းဖူးတွေကို အိမ်ပြင်မှာချထားသတဲ့ ။ကျီးကန်းတွေက ပြောင်းဖူးစားပြီး မူးတော့တာပေါ့။ မူးတော့ မပျံနိုင်ဘဲ ဟိုယိမ်းဒီထိုးနဲ့ ဖြစ်နေချိန်မှာ လယ်သမားက တင်းပုတ်နဲ့ ထုပြီး သတ်စားပါသတဲ့။ မိုက်မဲတဲ့ ကျီးကန်းတွေ တောင်ပံမမနိုင်ဘဲ ထော့နဲ့ ထောနဲ့ ခုန်ဆွခုန်ဆွ ဖြစ်နေပုံကို ပြဖို့ သီချင်းဆိုတဲ့သူက သီချင်းတစ်ပိုဒ်ပြီးတိုင်း ခုန်ဆွခုန်ဆွလုပ်တယ်။ ဒီသီချင်းဟာ စစ်ပြီးခေတ်မှာ အနှစ်နှစ်ဆယ်ကျော်ကြာအောင် ဟုန်းဟုန်းတောက်နာမည်ကြီးခဲ့တယ်။ ဆိုတဲ့သူက မျက်နှာကို အမည်းရောင်သုတ်ပြီး စုတ်စုတ်ပြတ်ပြတ်ဝတ်ထားတဲ့ လူမည်း သူရင်းငှားတစ်ယောက်ပုံစံဖမ်းပြီး သီချင်းစာသားကိုလည်း ပညာမဲ့ လူမည်းတွေပြောတဲ့ မပီမသ သဒ္ဒါမမှန်တဲ့ အင်္ဂလိပ်စာနဲ ဆိုထားတာပါ ။
လူမဲကို နှိမ်ဆိုထားသောJump Jim Crow သီချင်းကြော်ငြာတစ်ခု
အဲ..ဆက်ရရင် ရိုက်စ်ကိုမွေးတဲ့ အချိန်မှာ အဲဒီ ဥပဒေကြီး ရှိနေတယ်။ Jim Crow Law ရဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်က လူဖြူကြီးစိုးရေး ၊လူမည်းတွေကန့်သတ်ရေး၊ လူမည်တွေမဲပေးခွင့်မရရေးပါ။ Jim Crow Law ရဲ့ ကန့်သတ်ပုံကို ဥပမာပြောရရင် လူမည်းနဲ့လူဖြူမယူရ ၊ဆေးရုံမှာ လူမည်းတွေရှိတဲ့ အဆောင်တွေဆို လူဖြူ သူနာပြု မရှိစေရ ။ ပြည်သူပိုင် သောက်ရေစင်တွေမှာ လူဖြူနဲ့ လူမည်း သတ်သတ်ခွဲသောက်ဖို့ဆိုပြီး နှစ်နေရာခွဲထားတယ် ။ ကားမှတ်တိုင်တွေမှာ စောင့်ဖို့ နေရာကို လူဖြူသပ်သပ် လူမည်း သပ်သပ် ပေးထားတယ် ။စားသောက်ဆိုင်တွေဆိုလည်း ဒီအတိုင်းဘဲ ။
သပ်သပ်စီခွဲထားသော ရေစင်တွင် ရေသောက်နေသော လူမဲတစ်ဦး ။
လူဖြူတွေက ဆိုင်ထဲမှာ ကျကျနန စားရပြီး လူမည်းကို ကျတော့ ဆိုင်နဲ့ ခွဲထားပြီး Colored dining room လို့ကို ရေးထာတဲ့ ကားဂိုဒေါင်သာသာ နေရာကျဉ်းကျဉ်းမှာ စားစေတယ်။ ကားရထားပေါ်မှာလည်း သပ်သပ်စီ ထိုင်ရတယ် ။ ဘယ်လောက်များလူမဲမုန်းသလဲဆိုရင် တစ်ချို့ နေရာတွေမှာဆို ခွေးနဲ့ နီဂရိုး မ၀င်ရ လို့ကို ရေးထားတယ်။
စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုတွင် လူမဲများအတွက်သပ်သပ်ခွဲထားသော နေရာ
အဖြူနဲ့ အမည်း ကျောင်းအတူ မတက်ရဘူး ။လူဖြူနဲ့ လူမဲကြားမှာ စာအုပ်ဘာညာ ငှားတာမျိုးမလုပ်ရဘူး ။ လူဖြူကလေးက အတန်းကြီးသွားလို့ ဖတ်စာအုပ် အဟောင်းလေးတွေ ဟို လူမဲလေးးကို ပေးလိုက်ပါဦးမယ်လို့ မရှည်မိစေနဲ့ဆရာ ..မရဘူးဆိုမရဘူး ။ လူမည်းစာအုပ်လူမည်းပေးသုံး လူဖြူကစာအုပ် ပေးချင်ရင် လူဖြူကိုဘဲ ပေး။ ရုပ်ရှင် ပြဇာတ်တို့လည်းအတူမကြည့်ရဘူး ။ အများသုံး တယ်လီဖုန်းတွေဆိုလည်း သပ်သပ်စီ။ လူမဲ မုတ်ဆိတ်ရိတ်သမားဟာ လူဖြူကို ရိတ်ပေးလို့ မရဘူး။ သေတာတောင် လူဖြူ လူမဲ အတူမမြုပ်ရဘူး ။ အလုပ်အကိုင်ဆိုရင်လည်း လူဖြူကိုသာ ဦးစားပေးတယ် ။ လူလိုကြောင်း ကြေငြာတာကိုက White Only ဆိုတာမျိုး။
လူဖြူတွေသွားတဲ့ ပန်းခြံတို့ အပန်းဖြေနေရာတို့ကို လူမည်းတွေ မလာရဘူး။ အိမ်ခန်းတိုက်ခန်းငှားတာတောင် အဲဒီအဆောက်အဦးမှာ လူဖြူတစ်ယောက်လောက် ငှားနှင့် နေနှင့်ပြီးသား ဖြစ်နေတာနဲ့ လူမည်းကို မတင်ရတော့ဘူး။ အဲဒါ သဘောကောင်းတဲ့ လူဖြူက ငှားလိုက်ပါမယ်လေ လို့ သွားမလုပ်နဲ့ ။ လူဖြူပေမယ့်ဒီဥပဒေကို မလိုက်နာရင် အနည်းဆုံး ဒဏ်ငွေ နဲ့ ကံမကောင်းရင် ထောင်ကျဘဲ ။ကဲ...အဲလိုနေရာမှာ လူဖြစ်လာရတဲ့ ရိုက်စ်ရဲ့ဘ၀ကို လွယ်တယ်လို့တော့ဆိုလို့မရဘူး မဟုတ်လား။ ဒါကြောင့် ရိုက်စ်က နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါ ပြောတဲ့ မိန့်ခွန်းတစ်ခုမှာ
'' When America's founding father said '' we the people '' , they didn't mean me. ''
အမေရိကန်နိုင်ငံကို တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေက '' တို့ပြည်သူတွေ'' လို့ ဆိုတဲ့စကားဟာ ကျမကိုတော့ မရည်မရွယ်ခဲ့ပါဘူး လို့ ပြောဖူးပါတယ် ။( ၀မ်းနည်းဒယ်..ဟင့်..ဒကယ်ပြောတာ )
လူမဲများအတွက်ကန့်သတ်ထားသောနေရာတွင် လူမဲတစ်ဦး ကားစောင့်စဉ်
သမီးကို အနှိမ်ခံမဖြစ်စေလိုတဲ့ ရိုက်စ်မိဖတွေဟာ ရိုက်စ်ကို အတတ်နိုင်ဆုံး အိမ်ပစ္စည်းတွေကို သုံးစေခဲ့တယ်။ လူဖြူလူမဲခွဲသုံးရတဲ့ အများသုံးနေရာက ပစ္စည်းတွေကို မသုံးစေခဲ့ဘူး။ တစ်ခါက ရိုက်စ်နဲ့ သူအမေဟာ အကျီင်္ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ အင်္ကျီဝယ်တော့ ဆိုင်ကစာရေးမက ရိုက်စ်ကို လူမည်းတွေအတွက်ထားတဲ့ အစမ်းဝတ်ခန်းကို သွားခိုင်းတယ်။ ရိုက်စ်အမေဟာ ဆိုင်စာရေးမကို အတိုက်အခံပြောပြီးတော့ကို သမီးကို လူဖြူအတွက်ထားတဲ့ အခန်းကို သွားစေခဲ့တယ်။ ရိုက်စ်အဖေဟာ ရိုက်စ်ကို အိမ်ဖြူတော်ရှေ့ကို ခေါ်သွားပြီး '' သမီး ၊ အခုအချိန်မှာသမီးဟာ မိုးမျှော်တိုက်ပေါ်တက်ပြီး လူဖြူတွေနဲ့ ဟမ်ဘာဂါ အတူစားလို့ရချင်မှရမယ်။ ဒါပေမယ့် အမေရိကန်သမ္မတတော့ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ် '' လို့ ပြောဖူးတယ်။ ဒီစကားကို ရိုက်စ်နားလည်ထားလိုက်တာကတော့ သူဟာ သူများထက် နှစ်ဆပိုတော်နေမှ ဖြစ်မယ် ဆိုတာပါဘဲ။
အသက် ၃ နှစ်မှာ ရိုက်စ်ဟာ စန္ဒရားတီးတာရယ် ၊ ဘဲလေးကတာရယ် ၊ ရေခဲပြင်ပေါ်မှ အလှပြ စကိတ်စီးတာရယ်၊ ပြင်သစ်စာရယ်ကို သင်ယူခဲ့တယ်။ အသက် ၅ နှစ်မှာ သူ့အမေနဲ့လိုက်ပြီး ဘုရားကျောင်းမှာ စန္ဒရားဝင်တီးနေပါပြီ။
သုံးနှစ်အရွယ် ဘဲလေးအက သင်နေတဲ့ရိုက်စ်
စန္ဒရားဆရာမဖြစ်တဲ့ သူ့အမေကြောင့်ငယ်ငယ်ကတည်းက ဂီတနဲ့အကျွမ်းဝင်ပြီး အခုအချိန်ထိ စန္ဒရားကို အမြတ်တနိုးတီးဆဲပါဘဲ။ ရိုက် ၁၀ နှစ်လောက်မှာ သူ့အမေကို '' စန္ဒရားမတီးချင်တော့ဘူး အမေရယ်'' လို့ ပြောဖူးသတဲ့။ ဒီတော့ သူ့အမေက '' သမီးက စန္ဒရားမတီးတော့ဘူး လို့ ပြောနိုင်ရလောက်အောင် စန္ဒရားကို ကျွမ်းကျင်နေပြီးလား ၊အဲဒီလို ပြောနိုင်လောက်အောင် အသက်အရွယ်ကို ရောက်ပြီးလား '' လို့ ပြောပြီး အတင်းဆက်သင်ခိုင်းပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ဆက်သင်လိုက်တာ ခုဆို ကမ္ဘာကျော် ဂီတပညာရှင်တွေနဲ့တွဲပြီး ဖျော်ဖြေမှုတွေ များစွားလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ အင်္ဂလန်ဘုရင်မကြီးရဲ့ နန်းတော်မှာတောင် တီးပြနိုင်ခဲ့တယ်။ ဒါနဲ့ ကွန်ဒိုလီဇာ ဆိုတဲ့နာမည်ကလည်း con dolcezza ဆိုတဲ့ အီတလီ ဂီတစကားတစ်ခုလာတာပါ ။ con ဆိုတာ အီတလီဘာသာမှာ နှင့် (with) လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပြီး dolcezza ကတော့ ချိုသာနူညံ့ခြင်း( sweetness ) လို့ ဆိုလိုပါတယ်။
ကမ္ဘာ့အတော်ဆုံး တယောပညာရှင် ရိုရိုမ နှင့် ။
ဒီလိုနဲ့ ကွန်ဒိုလီဇာရိုက်စ်လေးဟာ အသက် ၁၅ နှစ်မှာ ဒန်ဗာ မြို့က တက္ကသိုလ်ကို ချောချောမောမောနဲ့ရောက်လာပါတော့တယ်။ ဒါပေမယ့် မကြာခင်မှာဘဲ သူ့အမေရဲ့ ကင်ဆာ သတင်းဆိုးကို ကြားရပါတော့တယ်။ ရိုက်စ် အမေဟာ နောက်ထပ် ၁၅ နှစ် အသက်ရှင်နေထိုင်သွားနိုင်ခဲ့ပေမယ့် ရိုက်စ်ဟာ အဲဒီအချိန်တွေမှာ နေ့တိုင်းနေ့တိုင်း သူ့အမေကို ပူပန်ပြီးနေခဲ့ရတယ်။ အစကတော့ ဒန်ဗာတက္ကသိုလ်မှာ ရိုက်စ်ဟာ ငယ်ငယ်ကတည်းက တစိုက်မတ်မတ်တီးခဲ့တဲ့ စန္ဒရားပညာနဲ့ ဘွဲ့ယူမလို့ဘဲ။ ဒါပေမယ့် တစ်နေ့မှာ ကမ္ဘာ့အဆင့် ပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာ စန္ဒရားကို တဖက်ကမ်းခပ် တီးနေတဲ့ ၁၁ အရွယ်ကလေးတစ်ယောက်ဟာ ရိုက်စ်ရဲ့ အတွေးတွေကို ပြောင်းလဲပစ်စေခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီကလေးဟာ စန္ဒရားပညာမှာ ရိုက်စ် တစ်နှစ်လုံး သင်ခဲ့ရတာကို တစ်ခါကြားရုံနဲ့ တီးပြနိုင်တာကိုတွေ့တော့ ရိုက်စ်ဟာ အတော်လေး လေသွားတယ်။ သူတော်တယ်ဆိုတာ ပါရမီရှိတဲ့သူနဲ့ယှဉ်ရင် ဘာမှမဟုတ်ပါလားလို့ ပေါက်သွားသတဲ့။ဒီတော့ စန္ဒရားနဲ့ ဘ၀အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ဖို့ အရေးကို စွန့်လွှတ်လိုက်ပါတော့တယ်။ တက္ကသိုလ်မေဂျာကို စန္ဒရားကနေ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ပြောင်းတော့မယ်ဆိုတော့သူ့အမေနဲ့အဖေဟာ အတော်လေး စိတ်ဆင်းရဲသွားတယ်။ သူ့အဖေက '' သမီးရယ်၊ လူမဲတွေ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ပညာနဲ့ဘယ်လောက်များ အလုပ်ဖြစ်မှာလဲ '' လို့တားစကားဆိုတော့ ရိုက်စ်က '' ဂီတနဲ့လည်း အလုပ်ဖြစ်မယ်မထင်ပါဘူး အဖေ '' လို့ပြန်ပြောပြီး မေဂျာကို ပြောင်းဖြစ်အောင်ပြောင်းလိုက်ပါတယ်။
ဒန်ဗာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူ ၁၅ အရွယ် ရိုက်စ်
ဒါလိုပြောင်းလိုက်တာဟာ နောက်ပိုင်းမှာ ရိုက်စ်တစ်ယောက် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဖြစ်လာဖို့လမ်းစပါဘဲ။ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံဘာသာမှာ ရိုက်စ်ရဲ့ ဆရာက ဂျူးလူမျိုး ဂျိူးဇက် ကော်ဘယ် Jorsef Korbel ပါဘဲ။ ဂျိုးဇက်ဟာ နာဇီတွေနဲ့ ကွန်မြူနစ်တွေရဲ့ရန်ကြောင့် ထွက်ပြေးလာရတဲ့ ချက် Czech နိုင်ငံသား သံတမန်ဟောင်းဖြစ်ပြီး အမေရိကန်မှာ နိုင်ငံရေးခိုလှုံနေသူပါ။ ဂျိုးဇက်ရဲ့သမီးက နောက်ပိုင်းမှာ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဖြစ်လာမယ့် မယ်ဒလင်အောဘရိုက် Madeleine Albright ပါဘဲ။ မြန်မာ့အရေးကို အမြဲတမ်း အားပေးကူညီခဲ့သူဖြစ်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်း အရမ်းခင်မင်လေးစားသူဖြစ်ပါတယ်။ ဂျိုးဇက်တို့ ဂျူးမိသားစုတစ်ခုလုံးဟာ ရိုက်စ်နဲ့ အရမ်းခင်မင်ခဲ့ပြီး ဂျိုးဇက်ဟာ ရိုက်စ်ရဲ့ လမ်းပြသူ mentor တစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။မယ်ဒလင်အောဘရိုက်နဲ့ ရိုက်စ်တို့နှစ်ယောက်ဟာ အတန်းထဲမှာ အတော်ဆုံးကျောင်းသားတွေ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ( မယ်ဒလင်အောဘရိုက်ဟာ သူနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မဖြစ်ခင် တစ်နှစ်အလို ၁၉၉၅ မှာမြန်မာပြည်ကိုလာပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တွေ့ခဲ့ဖူးတယ် )
မြန်မာ့အရေးကို အမြဲအားပေးခဲ့သော မယ်ဒလင်အောဘရိုက် ၁၉၉၅ တွင် မြန်မာပြည်သို့လာစဉ်ဒေါ်စုနဲ့တွေ့
အသက် ၁၉ နှစ်မှာ ရိုက်စ်တစ်ယောက် ဂုဏ်ထူးတွေ တစ်သီကြီးနဲ့ ဘွဲ့ရပြီး Notre Dame တက္ကသိုလ်မှာ မာစတာဘွဲ့ကို တက်ပါတယ်။ သူဟာ အဲဒီကတည်းက ဆိုဗီယက်အရေးကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ဖို့ လမ်းပေါ်ရောက်နေပါပြီ။( အဲဒီတုန်းက ရုရှားနိုင်ငံဟာ မပြိုကွဲသေးဘဲ ဆိုဗီယက်နိုင်ငံအဖြစ်နဲ့ ရှိနေတုန်းပါ )။ ရိုက်စ်ဟာ ရုရှားနဲ့ပတ်သက်သမျှကို အရူးအမူး စိတ်ဝင်စားသူဖြစ်တယ်။ သူစီးတဲ့ ကားကိုတောင် ရုရှားနိုင်ငံရေးသမားတစ်ယောက်ရဲ့ နာမည် Boris လို့ပေးထားပါတယ်။ မာစတာဘွဲ့ရအပြီးမှာ ဒန်ဗာတက္ကသိုလ်ကို ပြန်လာပြီး ပါရဂူဘွဲ့ကိုယူတယ်။ ဒီနောက် အသက် ၂၆ နှစ်မှာ နာမည်ကြီးတက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ စတန်းဖို့ဒ် Standford မှာ လက်ထောက်ကထိက ဖြစ်လာပါတယ်။
ငယ်ရွယ်တဲ့ထက်မြက်တဲ့ရိုက်စ်တစ်ယောက် လူတိုင်းရဲ့အာရုံကို ဖမ်းစားနိုင်ခဲ့တယ်။ အဲမှာ စတွေ့တာဘဲ။ Bush ရဲ့အဖေ Bush ကြီးနဲ့လေ။ ( သမ္မတ George W .Bush ဟာ အမေရိကန်ရဲ့ ၄၃ ယောက်မြောက် သမ္မတ ဖြစ်သလို သူ့ အဖေ George H.W Bush ကလည်း ၄၁ ယောက်မြောက် သမ္မတ ဖြစ်တယ်။ သားအဖ နှစ်ယောက်ရဲ့နာမည်များ မှည့်စရာရှားလို့နော်။ H ကလေးဘဲကွဲတယ်။ မျက်စိလည်စရာ )။ အဖေ Bush ကြီးလက်ထက်မှာ နိုင်ငံတော် လုံခြုံရေး အကြံပေးဖြစ်လာတာက Brent Scowcroft ဆိုသူပါ။ သူဟာ ၁၉၈၇ မှာ တက္ကသိုလ် ကွန်းဖရန့်စ် တစ်ခုမှာ ရိုက်စ်ကို မျက်စိကျသွားပါတယ်။ ဒီမဲမဲသဲသဲ ထက်ထက်မြက်မြက်နဲ့ ဆိုဗီယက်အကြောင်းကို ဖင်ပြန်ခေါင်းပြန်သိသူလေးဟာ ဘူလေးလဲပေါ့ ။ ဒီလိုနဲ့အဲဒီလူကြီးကောင်းမှုနဲ့ ရိုက်စ်တစ်ယောက် အဖေဘုရှ် ကြီးရဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ထဲမှာ ဆိုဗီယက်ကျွမ်းကျင်သူရာထူးကို တန်းရသွားပါတယ်။ ဆိုဗီယက်နိုင်ငံကြီး ပြိုကွဲချိန်မှာ ဘုရ်ှကြီးဘေးကနေ အကြံပေးကူညီခဲ့တယ်။ အဲဒီကနေ ဖေဖေ ဘုရ်ှကြီးက ရိုက်စ်ကို သားသားဘုရ်ှကလေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပြီး သူ့သားကို ဆိုဗီယက်အကြောင်းကို သင်ပေးခိုင်းပါသတဲ့။ဒီလိုနဲ့ ရိုက်စ်တစ်ယောက် ဘုရ်ှတို့မိသားစုရဲ့ အမြှောက်စားခံဘ၀ကိုရောက်လာပါတော့တယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ သားဘုရှ် သမ္မတဖြစ်တော့ ရိုက်စ်အကြောင်းပြောတိုင်း ကျနော့်ကို ရှရှားနဲ့ပတ်သက်တာ အကုန်သင်ပေးခဲ့သူ လို့ အမြဲပြောလေ့ရှိပါသတဲ့ ။ဒီလိုနဲ့ ''တားတားရဲ့ ချာမ '' ရိုက်စ်လည်း တားတားရဲ့ သမ္မတ ပထမသက်တမ်းမှာ နိုင်ငံတော် လုံခြုံရေး အကြံပေး ဖြစ်လာပြီး ဒုတိယသက်တမ်းမှာတော့ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ ၆၆ ယောက်မြောက် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဖြစ်လာပါတော့တယ်။ ( မှတ်ချက်။ ၆၄ ယောက်မြောက်မှာ ရိုက်စ်၏ သူငယ်ချင်းလည်း ဖြစ် ရိုက်စ်ဆရာ၏ သမီးဖြစ်သူ မယ်ဒလင်အောဘရိုက် ၊ ၆၅ ယောက်မှာ ရိုက်စ်ကဲ့သို့ လူမဲဖြစ်သူ Colin Powell နဲ့ ယခု ဟီလာရီ ကလင်တန်ကတော့ ၆၇ ယောက်မြောက် ဖြစ်သည်။ ).
( မဆန့်တော့လို့ နောက်မှဆက်တော့မယ်နော်။ ပထမဆုံးရေးတာဖြစ်လို့အပိုအလိုအမှား ပါရင်ခွင့်လွှတ်ကြပါကုန် )
အအေမေရိကန်စစ်သည်တော်များနဲ့ ရိုက်စ် အီရတ်မှာ
at 7:21 AM Posted by forevernadi No comments:
အမေရိကန်၏ ပထမဆုံးလူမဲအမျိုးသမီး နိုင်ငံခြားရေးဝန်ြ...
အမေရိကန်၏ ပထမဆုံးလူမဲ အမျိုးသမီး နိုင်ငံခြားရေးဝန်...
" မေတ္တာထပ်ရစ် ချစ်ထက်ချစ်သူ။ မွေးမေထံသို့ အေးစေသံ
အနစ်နာခံ ပေးဆပ်သူတို့အား ပြည်သူတွေ လေးစားချစ်ခင် တ...
၀ါးသင်္ခရွာက ဘောလုံးကွင်းမှာ လူထုကို ပြောကြားသော ဒေါ်...
အမိုးစကား ( ၆၅ နှစ်ပြည့် ပြည်ထောင်စုနေ့ အမှတ်တရ ကဗ...
စာရေးဆရာကြီးမောင်လင်းယုန်( ရှမ်းပြည်)အား ရသအလင်းမှ...
ပူဇာစ ပူဇနေယျာနံ ဧတံမင်္ဂလ မုတ္တမံ!နှင့် ပူဇော်ထိုက်သ...
ဆရာတော် နှစ်ပါးရဲ့ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ ဓမ္မတွေကို ဘယ်လု...